Taleefanka gacanta ee Nokia ka hor intaanay iibsan shirkadda Microsoft | Androidsis
eBay mararka qaarkood waxay ku siin kartaa lama filaan wanaagsan. Gaar ahaan marka nooca la helay Nokio Ion Mini, mobilada gacanta lagu sameeyo ee jwax yar uun ka hor inta aysan shirkadda la wareegin Microsoft.
Telefoon Android ah oo layaab ku leh nashqadeyntiisa iyo taabashada ugu yar adigoon ilaawin xarrago; Muuqaal ay Nokia waligeed si weyn u soo caan baxday. Waxyaabaha xiisaha leh ee muuqaalkani waa xiriirka ay la leeyihiin ereyadii Bill Gates ee uu sii daayay maalmo ka hor ee la xiriiray khasaarihii Microsoft soo gaadhay ka bixitaankiisii ​​Android.
Nokia Ion Mini wuxuu ahaa moobayl ay Nokia doonayso suuqa tag ka hor intaadan helin shirkadda awoodda badan ee Microsoft. Mobiil aad u yar, laakiin aad u anfacaya inuu u noqdo beddel dhab ah wixii horey suuqa ugu jiray.
Hada Nokia Ion Mini waxaa lagu xaraashay eBay. Taleefan aan cid kale u muuqan, mooyee Palm Mini mooyee. Waxaan ka hadlaynaa 2013 iyo 2014 markii Nokia ay lahayd fikradda ah in la keeno taleefan casri ah oo aad u kooban suuqa.
Iyo sida aad ku arki karto sawirrada, uusan si xun u gaboobin mobilo ka socda Nokia oo Microsoft aysan wali joogin oo aad ka arki karto fasalka ay shirkadu waligeed lahayd. Xaqiiqdii, waxaa la xaqiijiyey in Nokia ay maanka ku haysay inay iibiso taleefannada gacanta wax aan raqiis ahayn sida markii dambe ku dhacday gacanta Microsoft.
Taas oo lafteeda ceeb weyn ku ah wixii shirkaddan ay ku soo kordhin lahayd, taas oo waqtigaas ahayd wax kasta oo adduunka loogu qabtay taleefanka gacanta. Bill Gates wuxuu yiri maalmo kahor: "luminta Android waxay ahayd guuldaradiisii ​​ugu weyneyd". Dabcan wayna ahayd, maxaa yeelay Nokia waxay waxoogaa fikrad ah ka haysatay inay soo gasho suuqa Android illaa Microsoft ay gacanta ku hayso oo waanu ognahay sheekada inteeda kale ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Midka aan waligiis aheyn, Nokia Ion Mini, mobilada Android ka hor inta aysan la wareegin Microsoft
Way adag tahay in hadda la falanqeeyo laakiin waqtigaas waxay u maleeyeen in ikhtiyaarka ugu fiican uu yahay Windows-ka oo nidaamku fiicnaaday, waxa fashilmayna wuxuu ahaa dukaanka App-ka, waxaa jiray macruufno xoog leh iyo Android - boqorka. Waxaan haystay Lumia waxaanan leeyahay xusuus aad ufiican marka laga reebo (qaraabo) saboolnimada barnaamijyada.
Sidaad u aragto, heshiis fiican uma ahayn Microsoft sidoo kale ama ma aysan garanaynin sida ugu habboon ee loola macaamilo.